Azụ Nkwado - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Azụ egbu egbu na-eji ejiji na-acha anụnụ anụnụ na oji na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ na akpụkpọ ahụ na-acha uhie uhie na-acha anya na-egbu egbu egbu azụ na-acha anụnụ anụnụ na nke oji ink; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
2. Azụ ejiji ink dee ahihia eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown hụrụ n'anya Akwụsị azụ ihe owuwu osisi ink; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma dị mma
3. Akwụsị azụ na a nnụnụ na imepụta ifuru na-eme ka anya elekere
Ndị ikom Brown na-aga maka igbu azụ site na nnụnụ na imepụta ifuru iji mee ka ha dị mma ma na-adọrọ mmasị
4. Back tattoo na nwoke ihu ihu na-eme ka mmadụ na-ele anya
Ndị mmadụ ga-ahụ azụ azụ na azụ mmadụ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka anya ha dị elu
5. Back Tattoo na pink nkwadebe ink nke lotus eme ka otu nwanyi lee anya
Ụmụ nwanyị na-ahụ azụ azụ a na-azụ azụ na-eme ka ogwe aka mara mma
6. Ụdị azụ dị iche iche na nnụnụ ink na onk okpokoro isi mee ka nwoke nwee anya mara mma
Ndị na-ahọrọ uwe elu aka ga-aga Backtoo na-eji ejiji ink nke oji nye ha ihe mara mma.
7. Azụ Tattoo na nkedo nnunu mere ka anya na-adọrọ adọrọ
Ụmụ agbọghọ na-eto eto na-etinye aka na-enweghị aka ga-ahụ azụ azụ na azụ nnụnụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ihe mara mma
8. Azụ Tattoo na ejiji onk na-eweta ihe ịtụnanya
Ụmụ okorobịa Brown ga - ahụ maka igbu onk nke oji; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị ịtụnanya ma dị mma
9. Azụ azụ na-acha odo odo nhazi osisi osisi eme ka ụmụ nwanyị mara mma
Ndị inyom hụrụ azụ tattoo na -emepụta osisi ink odo odo; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
10. Azụ Tattoo na ejiji ink mara mma na-eme ka ụmụ agbọghọ mara anya
Ụmụ agbọghọ, na-eji uwe na-adịghị akacha aka ga-aga azụ azụ na-eji ejiji ejiji ime ihe ngosi iji mee ka ọha na eze mara ha
11. Azụ Tattoo na-emepụta ihe osisi na-eme ka nwanyị na-ele anya
Ụmụ nwanyị Brown hụrụ azụ tattoo na ihe osisi; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma dị mma
12. Backtoo na egbuke egbuke na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka ụmụ agbọghọ nwee anya dị ịtụnanya
Ụmụ agbọghọ ga-aga azụ azụ na azụ na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ. Nke a na-eme ka ha nwee anya dị ịtụnanya
Back Tattoos Image credit na-aga: Pinterest.com, Tumblr.com, plus.google.com
okpueze okpuezearịlịka arịlịkaegbu egbu diamondegbugbu maka ụmụ agbọghọndị mmụọ oziọnwa tattoosụmụnne mgburip tattoosegbu egbu mmirienyi kacha mma enyin'olu olunnụnụkoi ika tattooegbu egbu egbuegbu egbuegbu egbu hennaazụ azụọdụm ọdụmenyí egbu egbuegwu egwuna-egbu egbuEgwu ugoaka mma akaaka akaỤdị ekpomkpaụkwụ akaegbu egbu osisi lotusAnkle Tattoosegbu egbu okpuegbu egbu ebighi ebindị na-egbuke egbukeakpị akpịechiche egbugbuima ima mmaakara ntụpọUche obingwusi pusina-adọ aka mmaGeometric Tattoosaka akazodiac akara akaraNtuba ntughariegbu egbu maka ụmụ nwokedi na nwunyemma tattoosakwara obiudara okooko osisiegbugbu egbugbumehndi imeweagbụrụ ebo